QC Engineer | Mudon Maung Maung Group of Companies ﻿
1.8.2020, Full time , Construction / Building
•	အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို နည်းစနစ် မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခြင်း
•	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်း အရည်အသွေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အစီရင်ခံစာများအားလုံးကို အချိန်မီတင်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်း
•	လုပ်ငန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော အရည်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း
•	အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်မှုများအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို စီစစ်လုပ်ဆောင်ခြင်း
•	လုပ်ကွက်တာဝန်ခံများ၊ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း
•	လုပ်ငန်း၏ အရည်အသွေးနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို စီစစ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်၍ တင်ပြခြင်း
•	BE (Civil) or AGTI (Civil) Good in computer skills (MS Suite, email, internet etc.)
319 Days, Full time , Construction / Building
• Assist in the development and implementation of goals, policies, priorities, and procedures relating to financial management, budget, accounting • Supervises and participates in the preparation of financial statements and reports. • Coordinate with finance team to complete assigned accounting tasks within deadlines. • Generate financial reports and statements to Finance and Account Manager for review. • Manages the deployment and maintenance of new accounting, timekeeping, inventory, property, and other related procedures and co ...
• လမ်း၊ တံတားနှင့် အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စီမံကွပ်ကဲခြင်း • သတ်မှတ်ထားသည့် design နှင့် drawing များ ကိုက်ညီစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း • Contract Staff များကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း • သတ� ...
•	အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို နည်းစနစ် မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခြင်း •	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်း အရည်အသွေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အစီရင်ခံစာများအားလုံးကိ ...
•	မြေသားလုပ်ငန်း (ဆည်မြောင်း တာ တမံ စသည့်) လုပ်ငန်းများကို စီမံကြီးကြပ်ခြင်း •	စက်ယန္တရားများ၊ ကားများကို ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း •	ငွေစာရင်းနှင့် ပစ္စည်းစာရင်းများကို တာ� ...
406 Days, Full time , Construction / Building
• Auto CAD-2D, 3D နှငှ့Excel ကှမှးကငှစှာအသုံးပှုတတရှမညှ။ • လုပငှနှးအတှအကှေုံ့ရှိသူကို ဦးစားပေးမညှ။ • နယဆှိုဒမှားတှငသှားရောကတှာဝနထှမှးဆောငနှိုငသှူ ဖှဈရမညှ။
•	Computer အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းနှင့် သဒ္ဒါ မှန်ကန်စွာရေးနိုင်ရမည်။ •	Myanmar Font, English Font Typing ကျွမ်းကျင်ရမည်။
407 Days, Full time , Construction / Building
•	လစဉ် လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်ပြီး Content Pillars များဖန်တီးရမည်။ •	Facebook Page များကို ကျွမ်းကျင်စွာ Manage လုပ်ရမည်။ •	Creative Content and Story များစဉ်းစားပေးနိုင်ရမည်။ •	Boosting Strategy များကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီး ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရ ...
•	Design and develop for web application development •	Develop and maintain both frontend and backend •	Provide training and teach to team as needed •	Responsible to setup and layout development environment •	Report to Project Manager or Leader. •	Young and fun environment
•တင်ဒါ ခေါ်ဆိုမှုများအား စုံစမ်းခြင်း နှင့် တင်ဒါဖောင်များ ဝယ်ယူခြင်း •တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်အရ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီအောင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြုစုခြင်း •လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် လုပ်ငန်းစာချုပ်များ ချ ...
•	Through knowledge of accounting and corporate finance principles and procedures •	Excellent accounting software user strong attention to detail
•	Duties and Responsibilities Overall responsible for managing stock To ensure the stock is counted and reconciled against the in-house control system Review customer returns Control and supervise transfers and all other operations in time Identify the new stock code for new items Identify the sales price and distribute to all outlets Reporting the fast-moving items of sale and balance from all outlet Solving the complain of stock from all outlet Review the monthly, quarterly and yearly report Monitoring and updating price changes items Check ...
QC Engineer Engineering & Technician Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Mudon Maung Maung Group of Companies Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Construction/ Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Yangon (Rangoon) 407 Days
Yangon (Rangoon) 451 Days
+Rest of the world 161 Days